Izindaba - GIFA 2019 EJALIMANE
IGIFA 2019 EJALIMANE
I-14th International Foundry Trade Fair neTechnical Forum ebibanjwe ngoJuni, 2019 eDuesseldorf, eGermany Njengomunye wabakhombisi, uFeng erda wazi abanye ozakwethu bebhizinisi.
I-GIFA-2019, Ehlelwe yi-The Messe Dusseldorlf Exhibition Company yaseJalimane, lo mbukiso wasungulwa ngo-2003 futhi ubanjwa njalo eminyakeni emine. Okwamanje ngumbukiso omkhulu wokujikijela nokulingisa emhlabeni jikelele.Ngasikhathi sinye, iJalimane isiko lezimboni zamazwe omhlaba kanye nombukiso wokwelashwa ngokushisa, i-Germany International metallurgical technology Exhibition.Ngowezi-2015, indawo yombukiso yeqe amamitha-skwele angama-86,000, futhi bekukhona ababonisi abangu-2,214 Izinkampani ezine ezidumile emhlabeni - i-MAGMA, i-ABP, i-ABB, i-OMEGA ne-DISA - ziveza imikhiqizo nobuchwepheshe obuphambili kakhulu emhlabeni.Izivakashi ezingaphezu kuka-78,000 ezivela ngaphezu kuka-120 amazwe avakashele lo mbukiso, kanti izivakashi ezimbili kwezintathu zavela kubakhiqizi, abathuthukisi, abasebenzisi kanye nabenzi bezinqumo bezinkampani ezithengayo ezinkampanini zabo.Ngowezi-2019, lo mbukiso uzobonisa imishini yokusakaza esezingeni eliphakeme kakhulu emhlabeni, ithuluzi nemitha nekhwalithi enhle kakhulu ekubunjweni futhi ekubunjweni, kuyinto ekubunjweni China, izinkampani imikhiqizo ekubunjweni ahlobene baqonde international ushintsho emakethe, khombisa ukusakaza kwethu nemikhiqizo ehlobene nayo, sandise imakethe yamazwe omhlaba, sithuthukise ukusakazwa okuthekelwayo kanye nezinto zokusakaza ithuba elihle kakhulu.
Kusuka mhla zingama-25 kuya kumhla zingama-29 kuNhlangulana 2019 i- "Bright World of Metals" ibonise uhla oluyingqayizivele lwezingqungquthela zomhlaba wonke, izingqungquthela, izinkundla nezinhlelo ezikhethekile. Imibukiso emine yezohwebo i-GIFA, NEWCAST, METEC neTHERMPROCESS inikeze uhlelo olusezingeni eliphakeme eligxile kulo lonke ubuchwepheshe be-Foundry technology, i-castings, i-metallurgy kanye ne-thermo process technology - kufaka phakathi ukukhiqizwa okungeziwe, izingqinamba zensimbi, izitayela embonini yensimbi, izici zamanje ze inqubo ye-thermo technology noma izinto ezintsha emikhakheni yokusebenza kahle kwamandla nezinsizakusebenza.
UFeng erda wathumela amaqembu ayisithupha okuthengisa abaphezulu ukuxoxisana ngokubambisana nezinkampani eziphezulu embonini yensimbi esizeni, futhi wazuza imiphumela emihle.Sibheke phambili embukisweni olandelayo.
GIFA, Sizokubona ngo-2023!